helppane.exe Ukwelekelelwa nokuSizwa kwe-Microsoft – Windows files
No Comments on helppane.exe Ukwelekelelwa nokuSizwa kwe-Microsoft
I-helppane.exe iyifayela elingelona uhlelo olukhona kwi-hard drive yekhompyutha futhi lithwala ikhodi yomshini.
Nanobe uhlelo lweMicrosoft Help and Support aluyona ifayela lesistimu futhi alubandakanyeki ekusebenzeni kweSistimu yokuSebenza, akufanele ukukhipha.
Ngokwemvelo, le nqubo ayibonisi kuMphathi Wezinkampani futhi ibhalwe kuphela uma usizo luceliwe. Akufanele ifakwe njengezinqubo eziyingxenye yokuqalisa uhlelo lwakho.
Ngokuvamile, ifayela le-Helppane.exe lisendaweni ye-C: \_ Windows. Lokhu kusho ukuthi ifayela lokuzalwa le-Microsoft Corporation futhi alifaki i-PC yakho noma yimuphi umonakalo. Kodwa-ke, uma kwenzeka uwuthola kwenye indawo, qiniseka ukuthi kabili hlola ukuthi akuyona igciwane.
Ekuphetheni, helppane.exe yi-Windows pre-efakwe Windows OS umsebenzi engumsebenzi we-Microsoft Help and Support service futhi inikeza ngezinsizakalo zosizo.
Ku-Winx64 uhlelo helppane.exe lwaziwa ngokuthi helppane.exe Ukwelekelelwa nokuSizwa kwe-Microsoft (32-bit)
Ezinye izinkinga ongahlangabezana nazo
Awuxhumekile ku-Inthanethi. Ukuze uthole uSizo ku-Inthanethi, olukubonisa ulwazi oluqukethwe lwamuva, kudingeka uxhumeke ku-Inthanethi. Hlola ukuxhumeka kwakho ku-Inthanethi.Uma uqhubeka ubona lo mlayezo, kungenzeka ukuthi isevisi yoSizo oluku-Inthanethi ayikho okwesikhashana. Zama ukuxhuma futhi kamuva.
Awuxhumekile oSizweni oluku-Inthanethi, lapho kutholakala khona okuqukethwe kosizo kwamuva. Thola uSizo ku-Inthanethi manje.
Usizo Ku-Inthanethi alutholakali ngolimi olusebenzisayo. Ukuze ubone okuqukethwe kosizo kwamuva, ungathola Usizo ku-Inthanethi ku-%1.
Usizo kanye Nokusekela akuvuleki ngoba i-Windows Update ifaka noma ikhipha okuqukethwe koSizo.
Ungaqala uSizo futhi uma isibuyekezo sesiqedile.
Usizo kanye Nokusekela kufanele kuvale ngesikhathi i-Windows Update ifaka noma ikhipha okuqukethwe koSizo.
Tags helppane.exe, Ukwelekelelwa nokuSizwa kwe-Microsoft
← winlogon.exe Ukusetshenziswa kokungena ku-Windows